Bu’aa filannoo Rippablika Dimookraatawaa Koongootiin paartiin mormituu injifate. - | - OBN
Bu’aa filannoo Rippablika Dimookraatawaa Koongootiin paartiin mormituu injifate.
OBN Amajji 02, 2011- Dorgomaan Paartii mormituu Feelikis Shisekedii filannoo pirezidantii Rippablika Dimookiraatawaa Koongoo morkii cimaa taasifamen filanicha injifate.
Bu'aa filannoo lakkaawamee hin xumuramin hogganaan paartii kuni morkattoota isaanii paartii mormituu irraa Maartin Faayuluu akkasumas paartii biyya bulchurraa Imaanu'el Shaadari irra aananiiru.
Yoo mirkanaa'e, erga biyyi Rippaabilika Dimookraatawaa Koongoo Beeljiyeem irraa walabummaa argattee yoo duraaf hogganaan miseensa paartii mormituu Obbo Shisekediin pirezidantii biyyattii ta'u jechaadha jedha gabaasni BBC.
Pireezidantiin amma aangoorra jiran Joseef Kaabilaa waggoota 18 booda aangoo irraa ka'uf jedhu.
Biyyattiin Beeljiyeem irraa bara 1960 walabummaa argatte as aangoo karaa nagaan dabarsuuf Obbo Kaabilaan waadaa seenaniiru.
Bu'aan filannoo gaafa Dilbataa ifa taha jedhamee eegame ture. Bu'aan filannoo garuu ammas jijjiiramuu danda'a.
Gaafa Kamisaa Hogganaan Komishinii Filannoo Biyyaalessaa biyyattii, Korneellee Naanigaa akka jedhanitti Obbo Shisekediin sagalee 38.5% argataniiru. Sababa kanaaf, ''pirezidantii ta'uf filatamaniiru,'' jedhan.
Obbo Shisekediin deeggartoota isaaniif ergaa dabarsaniin ''ammaan achi pirezidant Kaabilaa akka morkataatti ilaaluu hin qabnu,'' jedhaniiru.
Deeggartoonni isaaniis daandiitit bahani gammachuu ibsuutti jiru.
Haa ta'u malee, morkataan isaanii Maartin Faayuluun bu'aan filannoo ''dhugaa miti, waliin dhahaniiru. Ummanni Koongoo kana hin fudhatu'' jedhan.
Biyyi Firaansis , yaada isaanii waan deeggarte fakkaata.
''Qabxiin filannoo waan eegneerraa faallaa ta'eera,'' jechuun Ministirri Dhimma Alaa biyyattii Yives Le Diriyaan CNews'f himaniiru.
Ministirri Dhimma Alaa Beeljiyeem Didiyeer Reeyinders gama isaaniin bu'aa sagalee filannoo irratti shakkii akka qaban dubbachuu isaanii 'Reuters' gabaaseera.
Barreessaan Olaanaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UN) Antoniwoo Gutereez erga gama Dubbii Himaa isaanii Isteefan Dujaarik dabarsaniin ''qaamoliin hunduu walitti bu'insa irraa fagaachuu qabu,'' jedhaniiru.
Erga bara 1960 biyyattin walabummaa argatte as bulchitoonni karaa nagaa aangoo walharkaa fuudhanii hin beekan.
158 Views 1/10/19